​तिम्लाहा छोरी जन्माएकी अञ्जु रहिनन्, परिवार भन्छ, अस्पतालको लापरवाही ! – www.agnijwala.com
​तिम्लाहा छोरी जन्माएकी अञ्जु रहिनन्, परिवार भन्छ, अस्पतालको लापरवाही !
अञ्जुलाई त्यही दिन ब्यथाले च्याप्यो पनि । आफन्त, छिमेकी र श्रीमानसहितले अञ्जुलाई सिधै विराटनगरको कोशी अञ्चल अस्पताल पु¥याए । कोशी अञ्चल अस्पतालले अञ्जुको पेटमा ३ वटा बच्चा रहेकाले जोखिम हुने भन्दै आइसियु र एनआइसीयुको व्यवस्था भएको नोबेल अस्पताल लैजान सुझाव दिए । आइसियु र एनआइसीयुको आवश्यकता पर्न सक्ने तर आफूहरुको नभएकाले नोबेल लैजान काशी अञ्चल अस्पतालको सुझाव थियो ।
श्रीमतीको मृत्यु भएपछि भर्खर जन्मेका तीनवटै छोरीको विजोग प्रदीपले बताउनुभयो । श्रीमति गुमाउँदाको पीडासँगै आफूलाई तीन छोरी हुर्काउन चुनौति थपिएको उहाँले बताउनुभयो l
проверка сайта гуглрусскийpayperprofits.eduterraпродвиженияраскрутка сайтапаркетная доска елочкой